Volocopter Chengdu: nambara ny fiaraha-miombon'antoka fiaramanidina alemana-sinoa vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Volocopter Chengdu: nambara ny fiaraha-miombon'antoka fiaramanidina alemana-sinoa vaovao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao Mafana Alemana • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
UAM dia manondro fomba vaovao fitaterana an-tanàn-dehibe izay mampiasa fiaramanidina mitsangana sy miakatra (eVTOL) misimisy hivezivezena olona na entana ao anatin'ny habakabaka ambanivohitra sy ambanivohitra ambany. Manampy amin'ny fanalefahana ny lalan-kaleha amin'ny arabe ao an-tanàna izay miha feno olona ity ary mamela ny olona sy ny entana ho tonga amin'ny toerana alehany haingana sy azo antoka kokoa.
Ny ekipan'ny Volocopter any Alemana dia miara-miasa amin'ny Geely Holding Group hanangana fiaraha-miasa iraisana any Chengdu, Sina.
Ny fiaraha-miombon'antoka dia hiandraikitra ny famokarana sy ny fampandehanana ny vokatra Volocopter amin'ny tsena sinoa.
Ny tetik'asa iraisana dia mikasa ny hanampy amin'ny fampiroboroboana ny fivezivezena an-tanàn-dehibe any Shina ao anatin'ny telo ka hatramin'ny dimy taona ho avy.
Orinasa fiaramanidina iraisana, antsoina hoe Volocopter (Chengdu) Technology Co., Ltd., na Volocopter Chengdu fohifohy, dia nambaran'ny Volocoptera any Alemana, manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana fiara-manidina mizaka tena, sy ny sampana faharoa an'ny Geely Holding. Vondrona.
Ny fiaraha-miombon'antoka dia hiorina ao Chengdu, renivohitry ny atsimo andrefan'ny faritanin'i Sichuan any Shina, ary handray an-tanana ny famokarana sy ny fampandehanana ny vokatra Volocopter amin'ny tsena sinoa.
Volocopter Chengdu koa dia nanao sonia ny baiko niaraka tamin'ny Volocopter ho an'ny fiaramanidina 150, ao anatin'izany ny fiara fitaterana an'habakabaka tsy mitondra fiara sy fiaramanidina mpiadidy.
Fiara fitaterana an'habakabaka sy ny faritra misy azy dia hamokarana ao Hubei Geely Terrafugia, toby famokarana Geely any Shina, araka ny fiaraha-miombon'antoka.
Volocopter Chengdu dia hanatrika ny fampirantiana ny International Aviation and Aerospace China Airthow (Airshow China) faha-13 amin'ny 28 septambra izao.
"Androany dia manamarika zava-dehibe iray hafa amin'ny diantsika hitondra fivezivezena amin'ny alàlan'ny rivotra any Shina, ny tsena tokana lehibe indrindra ho an'ny indostrian'ny UAM," hoy i Florian Reuter, tale jeneralin'ny Volocopter.
Volocopter no mpanamboatra fiaramanidina eVTOL voalohany sy tokana eto an-tany amin'izao fotoana izao izay nahazo ny fankatoavana ny famolavolana sy ny famokarana Masoivoho misahana ny fiarovana ny sidina eropeana.